काेराेना सङ्कट : गूगल, फेसबुक, एप्पल र अमेजनकाे व्यापार चम्कियाे !:: Mero Desh
काेराेना सङ्कट : गूगल, फेसबुक, एप्पल र अमेजनकाे व्यापार चम्कियाे !
Published on: २१ बैशाख २०७७, आईतवार १५:१४
काठमाण्डाै – विश्वकाे ठूलाे हिस्सा लकडाउनसँग जुधिरहेकाे छ । उपभाेक्ताले खर्च गरिरहेका छैनन् र कैयाैँ उद्याेग त बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर प्राविधिक क्षेत्रका केही ठूला कम्पनीहरुमा काेराेना महामारीकाे झिनाे असर मात्र परेकाे देखिन्छ । याे सङ्कट समाधान
भएपछि यी प्राविधिक कम्पनीहरु झन् मजबुत भएर उभिने अनुमान गरिएकाे छ । पछिल्लाे केही दिनमा गूगलमाथि स्वामित्व राख्न कम्पनी अल्फाबेट एप्पल फेसबुक र अमेजनकाे नतिजा आएकाे छ । गाफा (गूगल एप्पल फेसबुक र अमेजन) ग्रुपबाट चर्चित यी कम्पनीहरु खतरनाक रुपमा शक्तिशाली भएकाे छ र यिनीहरु टुक्रिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
गूगल र फेसबुक
गूगल र फेसबुक दुवै पूर्णरुपमा विज्ञापनबाट हुने कमाइमा निर्भर छन् । विज्ञापन दिने कम्पनीले आफ्नाे मार्केटिङ बजेटमा कटाैती गरिरहेकाे अवस्थामा गूगल र फेसबुक जस्ता कम्पनीहरुले कष्टपूर्ण समय कटाइरहेकाे हामी साेच्छाैँ । गएकाे मार्चमा अल्फाबेट का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर पिचाईले विज्ञापनबाट हुने कमाइमा अचानका कमी आएकाे बताएका थिए । तर कम्पनीकाे शेयर मूल्यमा आएकाे उछालले कम्पनीकाे ब्यालेन्स शिटमा सुधार सुरु भएकाे बताइएकाे छ । फेसबुकले पनि काेराेना भाइरसकाे कारण विज्ञापन काराेबारमा केही असर पुगेकाे बताएकाे थियाे । तर पछिल्लाे तीन महिनामा पनि विज्ञापनबाट हुने कमाइ बढेकाे देखिएकाे छैन । अर्काेतर्फ अखबार र टीभी च्यानलकाे काराेबार पनि धराप बन्दै गइरहेकाे छ ।
यसैबीच एप्पलकाे हार्डवेयर व्यापार अर्थात् उसकाे फाेन बिक्रीमा कमी आएकाे छ तर कम्पनीकाे सर्भिसबाट हुने व्यापारमा भने वृद्धि भएकाे छ । अनलाइन रिटेल व्यापारकाे ठूलाे खेलाडी अमेजनकाे काराेबार तीव्र गतिमा बढिहरकाे छ । यसकाे क्लाउड कम्प्युटिङ व्यापारमा पनि राम्राेसँग चलिरहेकाे छ । यद्यपि काेराेना भाइरससँग जुध्न कम्पनीकाे खर्च अवश्य बढिरहेकाे छ । यसकाे कारण जेफ बेजाेसले लगानीकर्तालाई चुप रहन चेतावनी दिनु परेकाे थियाे । उनकाे लागि मुनाफा मात्रै सबथाेक नभएकाे सङ्केत थियाे । तर पनि सफलताका लागि खर्च गर, खर्च गर र गरी राख काे नीतिले नै उनलाई विश्वकाे धनी व्यक्तिमध्ये एक बनायाे । काेराेना सङ्कटपछि जेफ बेजाेस र उनकाे कम्पनी अझ सशक्त बनेर उभिने सङ्केत पनि देखिएकाे छ ।
अर्काे ठूलाे प्राविधिक कम्पनी माइक्राेसफ्टका सत्या नडेलाले यही हप्ता आफ्नाे कम्पनीले दुई महिनामा दुई वर्ष बराबरकाे कायापलट गरेकाे बताएका थिए ।
फलस्वरुप कम्पनीकाे नतिजा पनि राम्रै आइरहेकाे छ । नडेलाका अनुसार क्रान्तिकारी विकासकाे याे प्रक्रिया अझ द्रूत गतिमा बढाउने हाे भने कम्पनी अझ प्रभावशाली हुनेछ । तर जसरी कम्पनी सफल हुँदै गएकाे छ, यसले कम्पनीलाई पहिलेकाे भन्दा शक्तिशाली बनाएकाे छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाका आर्थिक सल्लाहकार भइसकेका ज्यासन फरम्यान कम्पनीमाथि कडा नियम लागू गर्नुपर्ने मागकाे जाेडदार समर्थन गर्छन् । काेराेना सङ्कटका कारण यी कम्पनीमाथि दबाब कम हुने फरम्यानकाे आशङ्का छ ।
अमेरिकी शेयर बजार
फरम्यान भन्छन्, ‘यदि अवस्था यही रहिरह्याे भने कम्पनीहरु आफूलाई सशक्त बनाउन मरिमेट्ने छन् । वा काेराेना सङ्कटका कारण उनीहरुमाथि लागू नियम केही खुकुलाे हुँदा याे हाम्राे लागि आर्थिक समस्याकाे कारण बन्नेछ ।’यही हप्ता मात्रै अमेरिका र युराेपमा यस्तै केही डरलाग्दाे आर्थिक आँकडा सार्वजनिक गरिएकाे थियाे । अमेरिकी शेयर बजारमा सुधार देखिएकाे छ । गएकाे महिना पछिल्लाे ३० वर्षमा सबैभन्दा राम्राे देखिएकाे थियाे ।
र याे सबै प्राविधिक व्यापारसँग जाेडिएका कम्पनीका कारण भएकाे हाे । अमेजन र नेटफ्लिक्सकाे शेयरमा गएकाे मार्च १५ देखि ४० प्रतिशतकाे बढाेत्तरी भएकाे पाइएकाे छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पकाे एजेण्डामा डाउ जाेन्स इण्डेक्समा निकै ध्यान दिइएकाे थियाे तर यी प्राविधिक कम्पनीकाे बढाेत्तरी हुन भनेकाे ट्रम्प प्रशासनले कुनै प्रकारकाे कारबाहीमा आफ्नाे इच्छाशक्ति गुमाएकाे प्रस्ट हुन्छ ।